Taliyihii Ammaanka R/Wasaare Kheyre Oo isku Dhiibay Dowladda Biljamka.
Tuesday January 30, 2018 - 08:25:42 in Wararka by Super Admin
Mas'uul sare oo katirsanaa Xafiiska R/wasaaraha dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa iska dhiibay mid kamida wadamada Qaaradda Yurub kadib socdaal shaqo uu halkaas ku tagay.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Ayuub Cali oo ahaa taliyihii dhanka ammaanka ee Xasan Cali Kheyre uu iska dhiibay wadanka Jarmalka kadib markii uu R/wasaaraha ku wehliyay socdaalkii uu ku tagay magaalada Devos ee wadanka Switzerland.
Saxafiyiin caan ah ayaa baraha bulshada ku faafiyay warka sheegaya in Ayuub Cali oo ay qaraaba hoose yihiin uu iska dhiibay qaaradda Yurub, sawirrada taliye Ayuub oo daba ordaya Xasan Cali Kheyre ayaa sidoo kale lafaafiyay.
Ayuub Cali ayaa ahaa madaxii ilaalada gaarka ah ee Kheyre wuxuuna uqaabilsanaa ammaanka, lama sheegin sababta uu isaga dhiibay qaaradda Yurub balse waxay wariyaashu ku sheegeen arrima ammaan maadaama Xukuumadda Kheyre ay Muqdisho ka geysatay falal dambiyeedyo ay kamid yihiin dilal ay ku fulisay dhalinyaro ku eedeysan dambiyada waxa loogu yeero Argagaxiso iyo weerar lagula kacay siyaasiyiin caan ah.
Saraakiisha ilaalada u ah Kheyre ayaa aaminsan in mar uun xilka qaadis lagu sameyn doono R/wasaaraha kadibna uu dib ugu laaban doono wadanka Norway ee uu ka yimid cidda kaliya ee laga aargoosan doonana ay iyaga tahay sidaasna ay isugu dhiibayaan dowlado shisheeye haddii ay fursad uhelaan.